Manasongadina ny olan’ny bala very ao amin’ny firenena ireo mpikatroka any Libanona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Desambra 2018 4:01 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Español, русский, English
Fampisehoana zavakanto miaraka amin'ny hafatra sosialy tao afovoan-tanànan'i Tripoli – mpanatrika mariazy iray no maty rehefa voatifitry ny bala very avy amin'ny nasaina iray hafa. Sary nahazoana alalana avy amin'ny pejy Facebook Farha Taysheh.
Tratran'ny bala very ny lohan'i Reem Shaker raha vao 18 taona monja izy teo an-davarangan'ny tranony tao an-tanàndehiben'i Miniyeh any Libanona . Tsy fifampitifirana ny tifitra izay nahafaty azy fa fety nataon'ny vondron'olona nankalaza ny fiverenan'ireo havan-tiany avy any amin'ny fivahinianana masina tany Lameka.
Ohatra iray amin'ny andianà fahafatesana tsy rariny vokatry ny tifitra atao rehefa misy fety fankalazana ny tantaran'i Reem .
Nanombatombana ny Fanadihadiana Manerantany momba ny Fitaovam-piadiana Madinika fa sivily miisa 1.927.000 no manana basy tamin'ny taona 2017 tany Libanona. Eo ho eo amin'ny ampahatelon'ny sivily Libaney eo no manana basy amin'ny mponina miisa 6.105 000. Araka ny Hetsiky ny Fandriampahalemana Maharitra, olona miisa 90 no maty tamin'ny taona 2017 noho ny bala very notifirina nandritra ny fampakaram-bady sy ireo fetim-pifalifaliana izay niafara tamin'ny fandatsahan-dra.
Tena nipaka tao am-pon'ireo mpikarakara ny fanentanana Farha Taysheh tao Tripoli (“Bala Very Mamono ny Hafaliana “) ity tranga ity. Iray tamin'ireo namana akaiky indrindra an'i Reem Marwa Seif, izay nanampy tamin'ny fanombohana ilay fanentanana tamin'ny fiandohan'ity taona ity ary nahatsapa ho tsy afa-manoatra izy manoloana ny antony nahafaty ny namany nandritra ny fotoana naharitra.
Saingy tamin'ny volana Mey 2018, nanova zavatra ny vondron'olona tsy nampoizina izay nanao fivoriana an-databatra tany Beirota. Nanatevin-daharana ny tanora avy ao an-tanàndehiben'i Tripoli i Seif , mpikambana avy ao amin'ny Tambajotran'ny Fisorohana ao An-toerana (LPN) any Tripoli, sady mpanelanelana avy amin'ny kaominina amin'ny fikarakarana.
Mikendry ny hananganana ny fotodrafitrasa ho an'ny hetsika tarihin'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fananganana fifandraisana eo amin'ny fikambanana ifotony sy ny kaominina ny Tambajotran'ny Fisorohana ao An-toerana, tarihin'ny Strong Cities Network (Tambajotran'ny Tanandehibe Matanjaka na SCN).
Nahazo (lohahevitra) saropady ny tantaran'i Seif .
Nipetraka teo amin'ny latabatra ankilany ary nizara ny tantarany i Duaa, mpandray anjara hafa tao amin'ny atrikasa: namoy ny rahavaviny izay dimy ambin'ny folo taona izy vao haingana noho ny bala very, nandritra ny fihazana tamin'ity indray mitoraka ity. Nihaino tsara ny tantaran'i Duaa i Najia, mpanelanelana ao amin'ny tanànan'i Tripoli sady mpikambana LPN ao an-toerana.
Raha mikendry ny ekstremisma mahery setra amin'ny alàlan'ny fitaovana fisorohana no tena laharam-pahamehan'ny LPN dia niafara tamin'ny famahana ny olana maro samihafa ao an-toerana izy ireo. Nametraka ny laharam-pahamehany manokana ny tambajotra. Ny fankatoavany ny fanentanana dia manambara ny fanekeny ny fisian'ny hetsika fisorohana .
Tao anatin'ny volana manaraka, niara-niasa tamin'i Najia i Seif sy Duaa mba hampiroboroboana sy hanombohana ny fanentanana Farha Taysheh. Nametraka ny herisetra vokatry ny tifitra ankalamanjana atao mandritra ny fety ho ao anatin'ny hodinihan'ny governemanta [fiadidiana] ao an-toerana ity fankatoavan'ny kaominina ity.
Miaraka amin'ireo mpirotsaka an-tsitrapo hafa, nikarakara ny fampisehoana ara-javakanto tamin'ny endriny ara-tsosialy i Seif sy Duaa: izany dia fampakaram-bady natao tao afovoan-tanànan'i Tripoli, izay nahitana ireo mpandray anjara manao fihetsika manoloana ny mody natao fahafatesan'ny mpanatrika fampakaram-bady iray taorian'ny tifitra bala very nataon'ny mpanatrika iray hafa. Noraketina an-tsary ilay fampisehoana ary nozaraina tao amin'ny Facebook, ka niteraka fifanakalozan-kevitra sy nahasarika ny fitantaran'ny fampahalalam-baovao.
Iray amin'ireo fanentanana izay mikendry ny hiady amin'ny herisetra tsy azo ihodivirana vokatry ny fananana fitaovam-piadiana — na niniana natao na tsia — ny Farha Taysheh. Nanome sehatra matanjaka ho an'ireo mpikatroka tanora mba hisarika olona maro kokoa ny fanohanan'ny kaominina. Tsy tontosa raha tsy nahazo alalana avy amin'ny manampahefana tao an-toerana ny fampisehoana lehibe nataon'ireo mpikatroka tao afovoan-tanàndehiben'i Tripoli .
Nahatonga ny fahombiazan'ity fanentanana ity tany Tripoli ny fiaraha-miasa teo amin'ireo mpanao fanentanana tanora ifotony sy ny governemanta ao an-toerana, saingy ny fahasamihafan'ny zava-misy teo amin'ny tanàna tsirairay sy ny tambajotra fisorohana tantanan'ny vondrom-piarahamonina dia nahatonga ny safidy tamin'ny fanombohana ny lohahevitra maivamaivana kokoa mba hananganana ny fifampitokisana, ny finoana ary ny fahatokisana amin'ny famahana ny olana sarotra kokoa.
Niaraka tamin'ny angovon'ny tanora mpikatroka, nahomby tamin-kery ny Farha Taysheh, ka niteraka fifanakalozan-kevitra tao an-tanandehibe nanerana ny sehatry ny tambajotra sosialy tao an-toerana. Angamba satria olana eran-tany ny bala very – fa tsy olana manokana ho an'ny Libanona fotsiny ihany – ary misy manerana izao tontolo izao, hatrany Balkans ka hatrany Etazonia.
Tamin'ny taona 2017, naratra teo amin'ny lohany tamin'ny bala very nandritra ny fetin'ny faran'ny taona ny solontenan'ny fanjakana Texas, Armando “Mando” Martinez. Roa taona talohan'io, zazavavy kely iray 10 taona no namoy ny ainy tamin'ny bala very tao amin'ny fampakaram-bady tao Makedonia. Mandritra izany fotoana izany, nampiasa ny sehatry ny tambajotra sosialy mba hampitandremana ny olom-pirenena tsy hitifitra an-kalamanjana miaraka amin'ny fanenjehana heloka bevava sy ny sazy an-tranomaizina ho vokatr'izany ny Departemantan'ny polisy any Los Angeles, California.
Tsy afa-miala amin'ity resaka ity ny kolontsain'ny fitaovam-piadiana. Ny fanekena ara-kolontsaina ny fananana fitaovam-piadina no kofehy iraisana eo amin'ny firenena ahitana ny olana amin'ny bala very. Na dia izany aza dia tsy mitovy ny halehiben'ny loza vokatry ny bala very. Tany Libanona, ny programan'ny fampihenana ny fitaovam-piadiana tamin'ny ampahany, sy ny programan'ny fanarenana (DDR) taorian'ny ady an-trano (1975-1991) dia midika fa tsy nogiazana tanteraka ny fitaovam-piadian'ireo vondrona mpiady .
Olana eran-tany ny fanaovana fankalazana amin'ny alalan'ny fanapoahana basy ary mitaky ny famahana ny antony sasantsasany izay mahatonga izay hitohy ny ady amin'izany. Izany dia mitaky ny famahana ny fahazoan-dàlana hanana fitaovam-piadiana miparitaka sy ny tsy fisian'ny fandraisana andraikitra amin'ny mpitifitra.
Manana anjara lehibe noho izany ny fandraisana andraikitra eo an-toerana. Raha ho an'ny Farha Taysheh, ohatra iray amin'ny fomba ahafahan'ny andaniny roa hiara-hiady amin'ny olana iraisana dia ny bala very ny fiaraha-miasa eo amin'ny tanora mpikatroka sy ny tanàndehiben'i Tripoli .
Fanamarihan'ny toniandahatsoratra: Teraka tao amin'ny atrikasa nokarakarain'ny Tanoran'ny Tanandehibe ao Beirota (May 2018) ny Farha Tayshe. Nampivondrona ny tanora mpikatroka sy ny mpikambana ao amin'ny Strong Cities Network (SCN), ny Local Prevention Network (LPN) , anisan'izany ny solontenan'ny kaominina ny atrikasa. Ny Young Cities dia hetsika fiaraha-miasa eo amin'ny tambajotra Strong Cities Network sy ny Youth Civil Activism Network.